Hall ee ka YouTube mamnuucay | Apg29
Labada ciyaaryahan Pastor Stefan iyo Mary Hallman ayaa la ganaaxay ka YouTube.
Mary Hallman ka baahinta hore nool oo ay ku jiraan YouTube.
The wadaadada caanka Stefan iyo Mary Hallman ee YouTube channel ayaa la xiray by YouTube ay sabab u tahay "noqnoqda ama daran xadgudubyada hadalka siyaasadda mamnuucaya YouTube ee nacaybka."
"Dambiyada ka dhanka ah ay siyaasadda"
Labada ciyaaryahan Pastor Stefan iyo Mary Hallman ayaa live ka studio diray in Myresjöfönster labada on Facebook iyo YouTube. Laakiinse haatan ay YouTube channel ayaa laga saaray shirkadda Google leedahay sabab ah in ay ka dhigteen "noqnoqda ama daran xadgudubyada ay siyaasad ka mamnuucaya hadalada nacaybka dhaliya" .
Wadaadada waxay aaminsan yihiin in tani ay tahay been, waayo, waxay jecel yihiin dadka oo dhan, waxay ku wacdiyo Injiilka iyo keenayay oo dhan daawadayaasha barnaamijyada fursad ay ku aqbali Ciise.
email ka YouTube
Mail haddii xiritaanka sida Youtube soo diray in Hall ee.
In email ah in Stefan Hallman u helay ayaa sidoo kale sheegay in uu "ma furi karo, haysashada ama abuuraya xisaab kasta oo kale YouTube" . Hakinta sidaas ahaan doonaa weligiis iyo caalamka oo dhan. Isku dayga in ay u tagaan oo ay channel kulmay by qoraalkan:
Isku dayga in ay u aragto video ah in weli gundhig internetka, waxay u egtahay sidan oo kale:
Stefan Hallman ayaa sheegay in on Facebook :
"Waxaan la yaabay oo aad u murugo badan in YouTube channel leh 461 macaamiishu xiran yihiin weligood."
channels ayaa laga mamnuuci doonaa YouTube, aan akhriyay oo aan maqlay dhowr jeer tan iyo markii ay xoojisey siyaasadaha . Waxaa jiri doona labada Christian iyo non-Christian. Recently aan akhriyey in channel kale Christian la xiro. channel A in aan kaga jawaabay oo isku mid ma ahayn wax walba.
Waxa kale oo aan maqlay in 200 channels Muslim ah ayaa lagu xiray. Iyagu waxay u ordaan dacaayad Isis iyo in ka badan.
Waxa kale oo aan maqlay in Youtube noqon doonaa xataa ka badan u adag sidaas darteed waxaan ka filan karaa xiritaanka dheeraad ah. Halkan Masiixiyiinta iyo kuwa aan Masiixiyiinta labada xanuunsado.
Shaqsi ahaan, waxaan goostay in aan la hubkaa doonaa iyo isticmaalka warbaahinta bulshada, inta badan ee suurtogalka in la keeno fariin ku saabsan Ciise Masiix. Tani waxa ay ii ahayd dabeecad tan iyo bilowgii sida aan ku sameeyey on my website goobta blog a sanadkii 2007.
Sidoo kale waxaan go'aansaday in aan ku eekaan doonaa si ay Ciise si ay dadku u helaan fursad ay ku isaga hesho oo aanay u badbaadin. Ha ka qayb qaataan waxyaabo kale badan oo, taas oo labada dahsoon oo halis ma soo gaari karaan kartaa fariinta of Ciise.